कस्तो छ तपाइको यो साता ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशिफल - Netizen Nepal
Home अन्य संस्कृति
कस्तो छ तपाइको यो साता ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशिफल
काठमाडौँ, १८ बैशाख। कस्तो छ तपाइको यो साता ? हेर्नुहोस बैशाख १८ देखि २४ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
यो साता मित्रहरुबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ। पुराना साथी भाइको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहनेछ । राजनैतिक र वैदेशिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । प्रविधि मार्फत आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । साताको अन्त्यमा स्वस्थ्य बिग्रन सक्छ, सजक रहनु होला ।
स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुपर्ने छ। अनावश्यक ठाउंमा धन खर्च होला। महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला । साताको अन्त्यमा शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ । आफन्तले सहयोग गर्नेछन् । घरमा अतिथिको आगमन हुनेछ । समाजसेवामा मन पनि लाग्नेछ ।
यो साता शुभकार्यको योजना बन्नेछ । धनार्जनका नयाँ योजनाहरू पत्ता लाग्नेछन् । वैदेशिक क्षेत्रको काम विस्तारै अघि बढ्नेछ । मध्य सातामा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुन पनि सक्नेछ ।
यो साता शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । कुनै कुराले मन प्रसन्न रहनेछ । राजनैतिक क्षेत्रको कार्य विस्तारै अघि बढ्नेछ । मित्र जनको साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ ।
प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । न्यायिक र प्रशासनिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । यो साता भाग्योदय हुने योग छ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । धर्म, तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् ।
आफन्तहरूको सहयोगले कामहरू अगाडि बढ्नेछन् । स्वादिष्ट खानेकुरा पनि मिल्नेछ । नयाँ कार्यको चर्चा चल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ साथै केही कठिनाइको सामना पनि गर्नुपर्ला ।
यो साता मानसिक चिन्ता बढेपनि कार्यक्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । प्रेमका कोपिलाहरू फक्रिएर जानेछन् । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । अध्ययनअध्यापनको क्षेत्र भने कमजोर रहन सक्छ ।
यो साता मनमा हर्ष, उमङ्ग र उत्साह छाउला । नयाँ कार्यको योजना बन्ने र विभिन्न अवसर जुर्नेछ । बुद्धिको उपयोग गर्दा जटिल ठानिएको कामसमेत सम्पादन हुन सक्नेछ । प्रेमीबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
यो साता नयाँ कामको योजना बन्नेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । कृषि कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ । मध्य सातामा अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ ।
यो साता आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । धर्म,कर्म तथा समाज सेवामा मन लाग्नेछ । इष्टमित्रहरूसंग मेलमिलाप हुनेछ । प्रतिष्ठित काम गरेर अवसर हात पार्ने समय छ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग मिल्ला । प्रेममा सफलता पनि पाइनेछ ।
यो सातामा टाढिएका मित्रसँग नजिकिने समय छ । प्रणयप्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय रहेकोछ । कुनै महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी आइलाग्नसक्छ । शुभ कार्यमा सरिक पनि भाईनेछ । मध्य सातामा झञ्झटिलो काममा संलग्न हुनुपर्ने समय छ ।
यो साता सकेसम्म यात्रामा नानिस्केकै राम्रो हुनेछ। कार्य सम्पादनमा समस्या आउला । प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईंको खुट्टा तान्ने प्रयास गर्नसक्छन् । बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । साताको अन्त्यमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला । मनमा दुविधा पनि उत्पन्न हुनेछ ।